3 Echiche nwere ihe na-acha odo odo OR CRAYOLAS | Crafts Na
3 Echiche nwere ihe na-acha odo odo ma ọ bụ CRAYOLAS
Irene Gil | | Crafts, Crafts na agba, Crafts maka ụmụaka
Na nke a nkuzi m wetara gị 3 echiche ime na klọs ma obu mara dika klọs. Ha zuru oke ime ụmụaka, akpan akpan akpa ye udiana ekikere. Na nke atọ anyị na-eji akwa akwa igwe, mana na nlekọta nke okenye agaghị enwe nsogbu. Ya mere, nọrọ mara ihe niile ị nwere ike ịmepụta na ihe ndị a na-emekarị na nka.
2.1 Echiche 1: akpụ waxes
2.2 Echiche 2: Embossed ifuru eserese
2.3 Echiche 3: Mma akpa ákwà
Ime ihe ndị a nkà anyị ga-eji dị ka ihe nkịtị ihe klọs o klọs. Na mgbakwunye na ndị a ị ga-achọkwa ihe ndị a ihe:
Igwe ntutu ma ọ bụ egbe ọkụ
Na nke na-esote video-nkuzi i nwere ike ihu nzọụkwụ site na nzọụkwụ nke ọ bụla n'ime 3 echiche nwere agba waxes. Ha dị mfe ma ị nwere ike ịhụ usoro ha n'ụzọ zuru ezu.
Ka anyị gafere na nzọụkwụ soro site na nke ọ bụla nkà ya mere ị gaghị echezọ ihe ọ bụla ma ị nwere ike mee onwe gi n'ụlọ
Echiche 1: akpụ waxes
Na nke mbụ a echiche anyị ga-agbanwe ụzọ na-waxes. Ọ bụ ezigbo echiche nyepụ ma ọ bụ maka Egweri ihe ndị ahụ bụ na ụmụaka anaghịzi achọ n'ihi na ejiri ha eme ihe. Naanị belata waxs na obere iberibe ma tinye ha na ebu silicone ihe Ị chọrọ. Ghaghị ime ha 200ºC ruo mgbe waxes dị gbazee. Mgbe nke a mere, wepụ ebu na oven ma hapụ ya ka ọ kọọ. Mgbe ọ kpọrọ nkụ ị nwere ike ịmeghe waks gị, nke ga-enwe ọdịdị nke ebu ị jiri.
Ọ dị mma n'ihi na anyị amatala na ụmụaka na-achọkarị ihe ọhụrụ, na ike gwụrụ ha ma ọ bụ na ha chọrọ ihe mbụ. Site n'echiche a, ị gaghị enwekwa nsogbu ahụ ọzọ. Ọ bụrụ na ike gwụrụ ha nke ochie ha, gbanwee ha ka ha bụrụ ndị ọhụụ na-atọ ụtọ kama ịzụrụ ndị ọhụrụ.
Echiche 2: Embossed ifuru eserese
Maka echiche nke abụọ anyị ga-emepụta foto mbụ n'ihi na ha ga-abata kwado. Oge a ka m mere flores, ma i nwere ọtụtụ puku ohere. Naanị see akụkụ ịchọrọ larịị, na maka mpaghara ịchọrọ ịchọrọ na-agbaze wax na ka ọ daa na akwụkwọ ahụ. M na-eji egbe ọkụ iji gbazee ha n'ihi na o na-eme ya ngwa ngwa, ma oburu na i nweghi, i nwere ike iji a nkịtị draya ntutu.
Tinye a kpuchie mara mma ma ọ bụ pụtara ìhè, iche na gị enyemaka sere. Nwekwara ike ịme foto nke onye nwere uwe ma na ejiri ya gbazee waxes. Ma ọ bụ ọbụna ebe mara mma nke ụfọdụ mpaghara nwere enyemaka. Ihe a niile dabere n'echiche gị.
Echiche 3: Mma akpa ákwà
Echiche ikpeazụ bụ ọkacha mmasị m, n'ihi na ị nwere ike ịnweta oke ọ bụla uwe o obere akpa. Họrọ akwa ị chọrọ icho mma na a template na ọ masịrị gị. Yet wak shavings na stencil na ígwè ya. Echefukwala itinye ebe ahụ mmiri akwụkwọ o akwukwo nri na etiti ya ka wax ahụ ghara ịrapara na igwe gị.
Ihe dị mma banyere nke a bụ na ị nwere ike ịsacha ya na igwe na-asacha n'ihi na ọ naghị ada mbà, n'ihi ya ị nwere ike ịmepụta ọtụtụ akpa na uwe ejiji.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts » 3 Echiche nwere ihe na-acha odo odo ma ọ bụ CRAYOLAS
Mụta otu esi eme ite ntụpọ polka.
DIY atọ edokọbara maka inepo .bọchị